Uyakhala owavalwa ku-WhatsApp “kungenasizathu” | News24
Uyakhala owavalwa ku-WhatsApp “kungenasizathu”
Durban - Umfundi we-Fin24,okhala ngokuvalwa enkundleni yezokuxhumana edumile, uWhatApp, usechaze lesi sigameko esamehlela njengesicasulayo.
“Yebo ngavalwa kuWhatApp futhi kwakucasula njengoba bengazange babeke ngokucacile ukuthi kwakuyini isizathu. Ngabanjwa inkunzi mhaka-12 kuMashi 2016 kwathi emva kwezinsuku ezingu-3 kuya kwezingu-5 kamumva uWhatApp wangivala,” kusho u-Ashley, othi uze wakwazi ukusebenzisa le nkundla yokuxhumana emva kwezinyanga ezintathu.
OLUNYE UDABA: Ishaye uvala intombi ithumela izithombe zenduku yesoka ku-WhatsApp
UWhatApp angabavala abantu abawusebenzisayo uma ngabe bephula imigomo nemibandela yawo.
Phakathi kwezinye zezizathu ezingaholela ekuvalweni uWhatApp kubalwa “ukuthumela imiyalezo eminingi kubantu abangayigcinile inamba yakho”, “ukuvalwa abantu abaningi”, “ukuqala ama-group amaningi anabantu abangakufakile kuma-address book abo”, “ukuthumela umyalezo ofanayo kubantu abaningi”, kanye “nokuphula imigomo yokusebenza kwenkundla”.
U-WhatApp ngenye yezinkundla zokuxhumana ezingenisile njengoba idume ngokuthi iyonga ezindlekweni zokuxhumana.